Maleeshiyada Shabaab oo lacago baad ah ku soo daayay 7 shaqaale gar gaar oo duledka Baydhabo ay ku afduubteen | shumis.net
Home » Layaab » Maleeshiyada Shabaab oo lacago baad ah ku soo daayay 7 shaqaale gar gaar oo duledka Baydhabo ay ku afduubteen
Maleeshiyada Shabaab oo lacago baad ah ku soo daayay 7 shaqaale gar gaar oo duledka Baydhabo ay ku afduubteen
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in halkaasi ay soo gaareen 7 kamid ah shaqaale gar gaar oo ay horey u afduubteen maleeshiyaadka Shabaab gelinkii dambe ee Isniintii.
Wariyaha warbaahinta Qaranka ee magaalada Baydhabo Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa soo sheegaya in dadkaasi la afduubtay laga qaatay lacago baad ah oo gaaraya min 4000 kun oo dollar.
Shaqaalahaasi oo muddo todobaad ah ay gacanta ugu jireen koxda SHabaab aya isugu jiray 3 dumar ah, iyo 4 rag ah oo uu kujiray darawalkii waday gaarigii ay la socdeen, waxayna u shaqeynayeen hay’adda Gareedo oo ka shaqeysa arrimaha samafalka deegaanadaasi.
Majiraan wax war ah oo ka soo baxay mas’uuliyiinta hay’adaasi ee la xiriira dhacdadaasi, balse warar ka madax banana oo ay heleyso SONNA ayaa sheegaya in lacago baad ah laga qaatay dadkaasi la afduubtay.
Deegaanka Deynuunaay oo qayaas ahaantii 30 ilaa 25 KM dhanka Bari kaga beegan magaalada Baydhabo ayaa laga afduubtay shaqalaahasi xili ay ku guda jireen howlo hoodi shaqo ee dhinaca samafalka.
Title: Maleeshiyada Shabaab oo lacago baad ah ku soo daayay 7 shaqaale gar gaar oo duledka Baydhabo ay ku afduubteen
Posted by Unknown, Published at July 25, 2017 and have 0 comments